Filipina: Mahatsiaro ny vono olona tany Maguindanao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2019 4:17 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Filipino, বাংলা, Español, English
(Lahatsoratra tamin'ny janoary 2010)
Inona no ataonao amin'ny sakana sy ny olana eny amin'ny lalanao, hoy ny vazivazy iray niparitaka nandritra ny fety. Ny valiny dia ny mianatra mandevina azy ireo mba ho lavitra any ry zareo, mazava ho azy fa manondro ny fampiasàn'ny Ampatuan ny angady handevenana ireo lasibatra amin'ny fasana iombonana lalindalina izany. Tsaroana amin'ny fomba maro hafa ny fandripahana.
Sary mampihoro-koditra maro no miparitaka amin'ny aterineto. Mampibaribary ilay tranga manafintohina ireo bilaogy sy tambajotra sosialy Filipiana.
Mampifandray ny Fandripahana Maguindanao ny Critic After mba haka sarimihetsika ao anaty fifanakalozan-dresaka ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tohanan'ny fanjakana sy ny herisetra ara-politika mpiseho mahazatra amin'ny sarimihetsika Filipiana.
The Village Idiot Savant kosa mihevitra fa tsy tokony ho raisina toy ny lasibatra fotsiny ireo lasibatra tamin'ny fandripahana.
Amim-pahatsiarovantena no nandraisan-dry Mangodadatoa fanapahan-kevitra handefa ireo vehivavy sy mpanao gazety — tsy misy mpiambina sy fitaovam-piadiana — mba hanamafisana ny fikasana mandala filaminana ao amin-dry zareo. Fantatsika ny tohin'izany. Izany no antony tsy tokony handraisana azy ireo toy ny lasibatra fa maritiora.
Tahaka izany koa, lasa lohahevitra hihetsehana fanoherana sy araka ny tarazo ilay vono olona. The Vera Files mitatitra fa iray amin'ireo songadina tamin'ny Diaben'ny Arendrina fanao isan-taona tao amin'ny Oniversiten'ny Philipines Diliman tamin'ny volana Desambra lasa teo ny andiam-piara mampiseho ny vono olona .
Nanana ny hafatr'izy ireo momba ny vono olona tao Maguindanao ny Kolejin'ny Lalàna sy ny fikambanan'ny mpianatra mpitolona STAND UP. Nanana sariolon'ny trakitera sy kamiao kely rendrika (voaroba) ny STAND UP, samy lasa mariky ny famonoana ireo olona 57 ireo zavatra roa ireo, ka ny 30 amin'izy ireo dia mpanora-gazety novonoin'ny mpitarika ady Ampatuan tao Maguindanao tamin'ny 23 Novambra. Nanana tabilaon'ny lasibatry ny famonoana miaraka sary an-drindrina ahitana mpitarika ady mitana basy ao amin'ny Kolejin'ny Lalàna.
Mandritra izany fotoana izany, High Chair, gazety tononkalo any Filipina mangataka tononkalo havoaka amin'ny andiany faha-12 ka mampisongadina ny “Fandripahana tao Maguindanao”.
Nanambara lalàna miaramila tao amin'ny faritany Maguindanao nandritra ny herinandro tamin'ny volana lasa teo ny governemanta Arroyo, izay noheverina fa hanenjika an-dry Ampatuan sy ny tafiny manokana. Na izany aza, mbola ho hita eo ihany raha hiakatra fitsarana ireo nahavanon-doza na tsia.
Ho an'i Tonyo Cruz, toa nampiasain'ny governemanta Arroyo ny fanambaràna vao haingana momba ny lalàna miaramila mba hamelana ireo nahavanon-doza tamin'ny famonoana olona tsy ho tratran'ny lalàna.
Raha tsy toherina ny fanambarana ny lalàna miaramila, dia ho very zavatra maro ny Filipiana. Ny iray dia ny tsy ahafahantsika mitory ny iray amin'ireo fianakaviana mpitarika ady ratsy indrindra sy ireo mpiara-dia amin'ny filoha Arroyo izay nampiditra ny tenan'izy ireo tamin'ny vono olona faobe feno herisetra indrindra teo amin'ny tantara vao haingana …
Amin'izany fomba izany dia mangataka ny hanehoan'ny (hafa) hevitra momba ny Famonoana tao Maguindanao i Marianna Gurtovnik ao amin'ny The Mantle:
1) Ahoana no nandraisan'ireo antoko politika lehibe tany Filipina ny famotorana nahavoarohirohy an-dry Ampatuans tamin'ny famonoana olona marobe natao tany Maguindanao tamin'ny Novambra lasa teo?
2) Amin'izao fiafaran'ny fiantsorohany ny maha-filoham-pirenena azy izao, dia azo inoana ve ny filoha Arroyo fa hamita ny famotorana ity raharaha ity sy hanasazy an-dry Ampatuans raha hita fa meloka izy ireo? Nahoana?
3) Inona avy ireo dingana noraisin'ny fitondram-panjakan'i Filipina mba hanesorana ny fitaovam-piadiana eny an-tanan'ny milisy tohanan-dry Ampatuan izay voalaza fa voarohirohy tamin'ny famonoana?
4) Inona no mety ho fiantraikan'ny fiampangana an-dry Ampatuans eo amin'ny hery politika ao Maguindanao?